Mon, Feb 19, 2018 | 13:34:57 NST
​एउटै गाउँका नेताले तीन तहको प्रतिनिधित्व गरेपछि गाउँले गरे सम्मान
अर्घाखाँची, फागुन १ – एउटै गाँउका तीन पार्टीबाट स्थानीय, प्रदेशसभा र राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व भएको भन्दै तीनै जनालाइ गाँउलेले एउटै मञ्चमा सम्मान गरेका छन् ।
​७ नम्बर प्रदेशमा मतदान सम्पन्न, दुई सांसद मतदानमा अनुपस्थित
डोटी, माघ २४ – राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि ७ नम्बर प्रदेश डोटीमा भएको मतदान सम्पन्न भएको छ ।
तेह्रथुममा १६ जना उम्मेदवारले चुनावको खर्च विवरण बुझाएनन्
तेह्रथुम, माघ १३ –गएको मंसिर २१ मा सम्पन्न भएको प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यको चुनावमा तेह्रथुमबाट उम्मेदवारी दिएकामध्ये १६ जना उम्मेदवारले अझै खर्च विवरण बुझाएका छैनन् ।
‘नो भोट’को अभियानले दिलाएको न्याय !
सोलुखुम्बु,माघ १३–सोलुखुम्बुका तिङ्लाबासीले १० महिनाभन्दा बढीको सर्घषपछि अन्ततः तिङलालाई सोलुदूधकूण्ड नगरपालिकामा गाभ्न सफल भएका छन् ।
राष्ट्रियसभा चुनाव : जित्ने सम्भावित उम्मेदवार को को ?
काठमाडाैं, माघ ११ -राष्ट्रियसभाको ५६ सिटका लागि आउँदो २४ गते चुनाव हुँदैछ ।
राष्ट्रिय सभाको ५६ सिटका लागि आज उम्मेदवारी दर्ता : यस्तो छ निर्वाचन कार्यतालिका
काठमाडौं, माघ १० – राष्ट्रियसभाको ५६ सिटका लागि बुधबार उम्मेदवारी दर्ता हुँदैछ ।
प्रदेश २ मा कांग्रेस र मधेसी दलबीच तालमेल, कांग्रेसका उम्मेदवार को को ?
काठमाडौं, माघ १० – राष्ट्रियसभा चुनावको लागि नेपाली कांग्रेस र मधेसी गठबन्धनबीच प्रदेश नम्बर २ मा तालमेल हुने भएको छ ।
यी हुन् राष्ट्रियसभा चुनावमा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार
काठमाडौं, माघ १० – नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रियसभा चुनावको लागि उम्मेदवार तय गरेको छ ।
रुपन्देही, माघ १० – प्रदेश नम्बर ५ का प्रमुख उमाकान्त झाले प्रदेशसभा बैठक र प्रदेश सरकार गठनको तयारी भइरहेको बताउनुभएको छ ।
​प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि कर्मचारीको व्यवस्थापन बल्ल थालियो
काठमाडौं, माघ ९ – आइतबार प्रदेशसभाका सदस्यहरुले शपथ ग्रहण गरेर अधिवेशनसमेत आह्वान भइसकेको छ ।
काठमाडौं, माघ ८ – प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र प्रदेश सांसदको शपथपछि दलहरुको ध्यान प्रदेशसभा सरकार गठन र राष्ट्रियसभा चुनावमा केन्द्रित भएको छ ।
सातवटै प्रदेशमा ‘शीतल निवास’ को झल्को
राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा जस्तै दृश्य आइतबार सातवटै प्रदेशका अस्थायी राजधानीमा देखिएको छ । प्रदेश सांसदले प्रदेश प्रमुखबाट शपथ लिइरहँदा शीतल निवासको झल्को देखिएको हो ।
प्रदेश ५ का सांसदले शपथ लिए
भवानीप्रसाद पाण्डे/उज्यालो । रुपन्देही, माघ ७ – प्रदेश नम्बर ५ का प्रदेशसभा सांसदले आइतबार शपथ लिएका छन् । उद्योग बाणिज्य संघको सभाहलमा बुटवलमा शपथ ग्रहण समारोह भएको हो ।
दीपक मनाङे शपथ ग्रहणका लागि गएनन्
काठमाडौं, माघ ७ – मनाङबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित दीपक मनाङे आइतबार भएको शपथ ग्रहणमा उपस्थित भएनन् । पोखरामा ४ नम्बर प्रदेशका सांसदको शपथ ग्रहण भएकोमा मनाङे अनुपस्थित रहेका हुन् ।
सुर्खेत, माघ ७ – प्रदेश नम्बर ६ का प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ ।
२ नम्बर प्रदेशका सांसदले चारवटा भाषामा शपथ लिए
जनकपुर, माघ ७ – दुई नम्बर प्रदेशका एक सय ७ जना सांसदले फरक फरक भाषामा शपथ लिएका छन् । प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थले प्रदेशसभाका जेष्ठ सदस्य लगनलाल चौधरीलाई नेपाली भाषामा शपग गराए पनि अरु सांसदले भने आआफ्नो मातृ भाषामा शपथ ग्रहण गरेका हुन् ।
शपथमा भाग लिन दीपक मनाङेलाई पनि पत्र
काठमाडौं, माघ ७ – मनाङबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित दीपक मनाङे आइतबार हुने शपथ ग्रहणमा उपस्थित हुन्छन् कि हुँदैनन् ? पोखरामा ४ नम्बर प्रदेशका सांसदको शपथ ग्रहणको तयारी भैरहँदा धेरैले मनाङेलाई सम्झेका छन् ।
भवानीप्रसाद पाण्डे/उज्यालो । रुपन्देही, माघ ७ – पाँच नम्बर प्रदेशका प्रदेश सांसदको शपथ ग्रहण आइतबार अस्थायी राजधानी बुटवलमा हुँदैछ । शपथ ग्रहणका लागि प्रदेशसभाका सबै ८७ जना सांसद बुटवल आइपुगेका छन् । पाँच नम्बर प्रदेशमा ५२ जना प्रत्यक्ष र ३५ जना समानुपातिक गरी ८७ जना सांसद रहेका छन् ।
बन्दका कारण दाङको जनजीवन प्रभावित
दाङ, माघ ६ – पाँच नम्बर प्रदेशको अस्थायी राजधानी दाङमा नतोकिएको बिरोधमा चार दिनदेखि जारी अनिश्तिकालीन दाङ बन्दले जनजीवन कष्टपूर्ण बन्दै गएको छ । बन्दका कारण दाङको यातायात, बजार, उद्योग तथा शैक्षिक संस्था सबै बन्द रहेका छन् ।
अबको कानुनी र राजनीतिक बाटो के ?
प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी नतोक्दा हुँदै आएको राजनीतिक गतिरोध अन्त्य भएको छ । यसले राष्ट्रियसभाको चुनाव हुँदै प्रतिनिधिसभाको पूर्णता र नयाँ सरकार गठनको लागि बाटो खुलेको छ । अब कसरी अघि बढ्छ त राजनीतिक र कानुनी प्रक्रिया ?
काठमाडौं, माघ ६ – नवनियुक्त प्रदेश प्रमुखको पद तथा गोपनीयताको शपथपछि प्रदेशसभा सदस्यको शपथका लागि तयारी सुरु भएको छ । प्रदेशसभा सदस्यको आइतबार बिहान शपथ गराउनेगरी प्रदेश प्रमुखहरु शनिबार आआफ्नो कार्यस्थल पुग्दैछन् ।
धनकुटामा अनिश्चितकालीन कर्फ्यू
धनकुटा, माघ ४ – धनकुटामा अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाइएको छ । धनकुटालाई प्रदेश नं. १ को राजधानी बनाउन माग गर्दै प्रदर्शनकारीले सरकारी कार्यालयमा आगजनी गर्नुका साथै एम्बुलेन्स र दमकलमा पनि तोडफोड गर्न थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनिश्चितकालका लागि कर्फ्यू आदेश जारी गरेको हो ।
प्रदेशको राजधानी नजिक र टाढा हुँदा के फरक हुन्छ ?
सबैको मुखमा झुण्डिसकेको छ–अब गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुग्यो । अर्थात सिंहदरबारबाट पाइने सबै अधिकार आफ्नै गाउँठाउँबाट पाइन्छ । राजधानी त परको कुरा, जिल्ला सदरमुकाम पनि धाउनु पर्दैन ।
काठमाडौं, माघ ४ – निर्वाचन आयोगले मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा भएको प्रदेशसभा सदस्य चुनावको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत निर्वाचित भएका उम्मेदवारको नाम घोषणा गरेको छ ।
काठमाडौं, माघ ४ – सर्वोच्च अदालतले संखुवासभाका प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नं १ का नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार दीपक खड्काको सक्कल मतगणना मुचुल्का झिकाउने आदेश दिएको छ ।
प्रदेश प्रमुख र राजधानी तोक्न सरकारलाई अझै सकस, मन्त्रिपरिषद बैठक फेरि बस्ने
काठमाडौं, माघ ३ – प्रदेश प्रमुख र अस्थायी केन्द्रबारे निर्णय गर्न बसेको बुधबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद बैठक निष्कर्षबिहीन भएको छ ।
तीनजुरे–मिल्के–जलजलेका ताल–पोखरी सुक्न थाले (तस्बिरसहित)
प्राकृतिक एवम् जैविक विविधताले भरिपूर्ण तीनजुरे मिल्के जलजले (टिएमजे) क्षेत्रका प्राकृतिक पोखरी संरक्षण अभावमा सुक्न थालेका छन् । तेह्रथुम, संखुवासभा र ताप्लेजुङ्ग जिल्लाको संगमस्थल तीनजुरे मिल्के जलजले –टिएमजे) क्षेत्र गुराँसको राजधानी भनेर चिनिन्छ । यस क्षेत्रमा नेपालमा पाइने ३२ मध्ये २८ प्रजातिका गुराँस पाइन्छन् ।
राजधानी माग गर्दै धनकुटा बजार बन्द र मोटरसाइकलमा तोडफोड
धनकुटा, माघ ३ – प्रदेश नंं १ को राजधानी बनाउन माग गर्दै आन्दोलनकारीले धनकुटा बजार र कोशी राजमार्गमा यातायात बन्द गराएका छन् ।
दीपायललाई राजधानी माग गर्दै डोटी बन्द
डोटी, माघ ३ – प्रदेश नम्बर ७ को राजधानी दीपायल तोकिनु पर्ने माग गर्दै आन्दोलनकारीले बुधबारदेखि डोटीमा फेरि बन्द गरेका छन् । बन्दका कारण डोटीको जनजीवन प्रभावित बनेकोे छ ।
प्रादेशिक राजधानी माग गर्दै दाङमा अनिश्चितकालीन बन्द
दाङ, माघ ३ – प्रदेश नम्बर ५ को राजधानी दाङ बनाउन माग गर्दै आन्दोलन थालेका स्थानीय अगुवाले बुधबारदेखि दाङमा अनिश्चितकालीन बन्द आह्वान गरेका छन् ।
सरकारले आज प्रदेश प्रमुख र अस्थायी केन्द्र तोक्दै
काठमाडौं, माघ २ – सरकारले मंगलबार सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुख र अस्थायी केन्द्र तोक्ने तयारी गरेको छ । आज दिउँसो साढे ४ बजेपछि बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश प्रमुख तोक्नुका साथै प्रदेशको कार्य सञ्चालन गर्ने गरी अस्थायी केन्द्र तोक्न लागेको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।
२ नम्बर प्रदेशको समानुपातिक सांसद छान्न आयोग र राजपाबिच विवाद
निर्वाचन आयोग र राष्ट्रिय जनता पार्टी दुवैको कमजोरीका कारण २ नम्बर प्रदेशमा राजपाले पाएको समानुपातिक सांसद चयनमा विवाद भएको छ । आयोगले आफूले भनेअनुसार नाम पेश नगरे राजपाले २ नम्बर प्रदेशमा पाएको दशवटा समानुपातिक सांसदको नाम नै प्रदेश प्रमुखलाई नपठाउने चेतावनी दिएको छ ।
काठमाडौं, पुस २४ – राष्ट्रियसभाको चुनावपछि मात्रै सरकार छाड्ने तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अप्ठ्यारोमा पर्नुभएको छ । राष्ट्रियसभा चुनावअघि प्रदेशको राजधानी र प्रदेश प्रमुख तोक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई सम्बोधन गर्ने उचित बाटो पहिल्याउन नसक्दा उहाँ अप्ठ्यारोमा पर्नुभएको हो ।
​आयोगले चुनावको खर्च सार्वजनिक गर्यो
काठमाडौं, पुस २३–निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभामा भएको खर्चको विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।
​भाडाका घरमा जनप्रतिनिधि
तेह्रथुम, पुस २३ – नयाँ संरचनाको स्थानीय सरकारमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले भाडाका घरमै काम थालेका छन् ।
​चुनावको खर्च विवरण नै देखाएनन उम्मेदवारले !
रसुवा, पुस २२– स्थानीय तहको चुनावमा भाग लिएका तीन सय ७९ उम्मेदवारले खर्च विवरण नबुझाएको पाइएको छ ।
प्रदेश राजधानी तत्काललाई नतोकिने
काठमाडौं, पुस २२ – सरकारले अस्थायी राजधानी नतोकिकन प्रदेश प्रमुख मात्रै नियुक्त गर्ने तयारी गरेको छ । सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले सातवटै प्रदेशका प्रमुख नियुक्त गर्ने तर अस्थायी राजधानी भने नतोक्ने वाणिज्यमन्त्री मीनबहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो ।
राजेन्द्र लिङ्देन एमाले प्रवेश गरे सांसद पद नै गुम्ने
वाम गठबन्धनको समर्थनमा झापा–३ बाट निर्वाचित राप्रपाका महामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देन एमाले प्रवेश गर्ने चर्चा चुनाव अघि नै सुरु भएको थियो । नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई पराजित गर्दै राप्रपाको गाई चिन्हबाट देशभरबाट जित्ने एक मात्र प्रतिनिधिसभा सदस्य लिङ्देन एमाले प्रवेश गर्ने चर्चा अझै पनि सेलाइ सकेको छैन ।
अबको प्रधानमन्त्री ओली कि प्रचण्ड ?
एमाले माओवादीले चुनावका लागि जुन लयमा तालमेल गरेका थिए त्यसअनुसार पार्टी एकता प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेपछि भावी प्रधानमन्त्री को होला भन्ने प्रश्न उब्जिन थालेको छ ।
सोलुखुम्बुमा सात उम्मेदवारले बुझाए चुनावी खर्च विवरण
सुबास दर्नाल/उज्यालो । सोलुखुम्बु, पुस २१ - सोलुखुम्बुका अहिलेसम्म सातजना प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य उम्मेदवारले चुनावी खर्च विवरण पेश गरेका छन् । गएको मंसिर १० गते सम्पन्न चुनावबाट निर्वाचित भएका तीनजना सांसदसहित सात उम्मेदवारले चुनावी खर्च विवरण पेश गरेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सोलुखुम्बुले जनाएको छ ।
विदेशबाट फर्किंदा छोराले चिनेन
दिल्लीबाटै गीतालाई दलालले कुवेतका कुनै साहुले किनिसकेका रहेछन् । जुन कुरा उहाँले पत्तो पाउनुभएन । नेपालबाट दिल्ली अनि दिल्लीबाट कुवेत । गीता कुवेत पुग्दा दुई ठाउँमा बेचिइ सक्नुभएको थियो ।
​भोजपुरका मेयरको पत्रकारलाई धम्की
पूर्वका धेरै ठाउँमा सीआइबीको छापा, ९ करोडभन्दा बढी रकम नियन्त्रणमा
किन बिकेन बुटवल पावर कम्पनीको एफपिओ ?
प्रदेश एक : कांग्रेस संसदीय दलको नेता छान्न आज चुनाव हुने
टुँडिखेलमा आयोजित ६८ औं प्रजातन्त्र दिवस(फोटोफिचर)
वडाध्यक्षका हराएका छोरा मृत फेला